लभ स्टेशनका एक्ला यात्री प्रदिप खड्का::Ranga post
लभ स्टेशनका एक्ला यात्री प्रदिप खड्का
काठमाण्डौं : भन्नेले त भन्ने गर्छन् कि नेपाली फिल्मको बजार छैन । लगानी मात्र डुब्ने क्षेत्र हो । तर अहिलेका युवास्टार प्रदीप खड्का भने त्यसको अपवाद हुन् ।
प्रदीपले खेलेका अधिकांश फिल्मले लगानी मात्र उठाएका छैनन् । निर्माताको खल्तीमा नाफा पनि भरिदिएका छन् । र प्रदीप स्वयंले पनि एउटा फिल्मबाट मात्र ३० लाखसम्म लिएका छन् । यो चानेचुने कुरा पटक्कै हैन ।
सुन्दा अचम्म लाग्छ, नेपाली हिरोले पनि यत्रो पारिश्रमिक लिन्छ र ? तर यो सत्य हो प्रदीपसँग यस्तो स्टारडम छ जसका कारण नै निर्माताले एउटा कलाकाका लागि त्यत्रो पैसा खन्याउँछन् । यसको गतिलो उदाहरण त भर्खरै उनले नयाँ फिल्मका लागि मात्र ५० लाख पारिश्रमिक लिएका छन् । अचम्मको कुरा त के छ भने यति धेरै पारिश्रमिक दिने चलचित्रको छायाँकन उनले आफ्नो नयाँ चलचित्र लभस्टेशनको छायाँकन सकाएपछि मात्रै गर्नेछन् । लभस्टेशन उनको आफ्नै लगानीमा निर्माण भएको चलचित्र हो । उनले निर्माता तथा वितरक गोविन्द शाहिसँग मिलेर यो चलचित्र निर्माण गर्न लागेका हुन ।
यसले पनि प्रष्ट पार्छ कि प्रदीप खड्का उदाउँदो एक्ला सुपरस्टार हुन् । भलै उनका प्रतिस्पर्धीहरू नभएका होइनन् । तर प्रदीपसँग भएको मिजासिलोपन, आफ्ना समकालीन प्रतिस्पर्धीसँग गर्ने मितवत् व्यवहारले पनि उनलाई एक्ला सुपरस्टार बन्ने यात्रामा हिँडेका छन् भनेर भन्नमा कुनै अप्ठ्यारो मान्नुपर्दैन ।
प्रदीपले कसैलाई प्रतिस्पर्धी मान्दैनन् । यदि मान्छन् भने आफैंलाई मान्छन् । त्यो कुरा त उनले खेलेका हरेक फिल्मलाई हेर्ने उनका फ्यानहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ । उनले हरेक फिल्ममा आफूलाई निखार्दै लगेका छन् ।
युवतीहरुका एक मात्रै आईडियल प्रदीप असफलतासँग नडराउने कलाकार हुन् । पहिलो फिल्म ‘इस्केप’ असफल भयो, तर उनले हरेस खाएनन् । पढ्न अस्टे«लिया हिडेका प्रदिप रोकिए । सानैदेखी हिरो हुन्छु भन्ने सपनालाई उनले हराउन दिएनन् । समय र अवसरलाई समयमै ठिक ढगंवाट प्रयोग गर्न सकिएन भने पछि पछुतो मान्नुपर्छ भन्ने उखान छ, प्रदिपले यसलाई वढो ईमान्दार बनेर आत्मसात गरे । दोस्रो फिल्म प्रेम गितले उनलाई चम्कायो । यो फिल्ममा प्रदीपको कला देखेर नेपाली चलचित्रका पण्डितहरुले उनलाई राम्रो भविष्य रहेको आँकलन गरे । नभन्दै उनको दोस्रो फिल्म प्रेम गीत २ ले पनि उस्तै सफलताको स्वाद दियो । तेस्रो फिल्म लिलीवीली सुपरडुपर हिट भयो । अहिले हलहरुमा प्रदर्शन भैरहेको रोज राम्रै चलिरहेको छ, जसको यथार्थ नतिजा सायद केहि हप्तामा आउनेनैछ ।
उनलाई थाहा थियो, असफलताले नै मान्छेलाई सफल बनाउँछ । र त अहिले उनी एक्ला सुपरस्टार बन्ने दौडमा छन् । हाल प्रदीप आफ्नो ड्रिम प्रोजेक्ट ‘लभ स्टेशन’ को वर्कशपमा व्यस्त छन् । आफुले कमाएका फ्यानहरुको मन दुख्न नदिने ध्याउन्नमा छन् उनी । केहि हप्ता अघिको भेटमा प्रदीपले भनेका थिए, ‘फ्यानहरु यति कडा हुन्छन्, उनीहरुको मन दुःखाउने काम भयो भने त्यसको नकारात्मक रिजील्ट व्योहोर्नुपर्छ, जुन निकै तितो हुनेछ ।’ प्रदीप सोहि का्रण दिनरात नभनी अहिले लभ स्टेशनको काममा गहिरिएर लागेका छन् । लाखौं फ्यान प्रदीप भनेपछि ज्यान दिन तयार छन् । यो उनको उपलव्धी चानेचुने कुरा हैन । एउटा कलाकारले यति धेरै फ्यान कमाउनु लगभग सबथोक हो, अव उनले यि फ्यान घट्न नदिए पुग्छ ।
नेपाली फिल्म उद्योगका प्रदीप यस्ता अभिनेता हुन् जो हलिउडको कुरा गर्दा लियोनार्दो डिकाप्रियो र बलिउडको कुरा गर्दा आमिर खानको बाटोमा हिँडेका छन् । एउटा पर्फेक्सनिस्ट बाटो । प्रदीपका फिल्महरुले पनि यसको पुष्टि सजिलै गरिदिन्छ । प्रदीपको ईमान्दारीता र सत्य एउटै हो, काम भनेपछि निकै खट्ने । अहिलेसम्मका फिल्म हेर्दा पनि उनी मिस्टर पर्फेक्सनिस्टको बाटोमा हिँडेका छन् भन्नलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन ।
निरन्तर उकालो लागिरहँदा कहिलेकाही खस्छु की, लड्न पनि सक्छु की भन्ने डर हुदैन ? प्रदीपले यसअघि अन्तरवार्तामा भनेका थिए, ‘असफलतासँग डराउने र सानोतिनो चोटपटकले अत्तालीने बानी भए सायद अहिले प्रदीप फिल्म बाहिरको संसारमा हराईरहेको हुन्थ्यो ।’
प्रदिप खड्का एक त्यस्ता अभिनेता हुन जो लभ स्टोरी चलचित्रका एक्ला वादशाह हुन । अझ भनौं एक्ला यात्री, जो सयौं युवतीहरुको मन मुटुमा वस्न सफल छन् ।
प्रियंकादेखि विद्या बालनसम्म, यी हुन् बलिउडका धनी अभिनेत्री
क्या वात् फरदिन
कलम लर्काएरै लाखौं फ्यान